Imidiya yokuncokola njengesixhobo soLawulo lweNtlekele | Martech Zone
Imidiya yokuncokola njengesixhobo soLawulo lweNtlekele
NgoLwesithathu, Juni 12, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Sasiphambi kwexesha lethu! Malunga neminyaka emi-5 eyadlulayo, ndadibana noAdam Omncinci kwaye sakha ukudibanisa okubhaliweyo okupholileyo kunye neWordPress. Ithemba lethu yayikukuba abantu abalawula iingxaki babenokuyithenga bayisebenzise… ukuthumela izilumkiso nokubabuyisela abantu kwiziko lomyalelo elakhelwe kwiWordPress ukufumana ulwazi lwabo. Iminyaka emi-5 kamva kwaye kujongeka njengokulawulwa kweengxaki abantu ngoku bagqibela ngokuthatha imithombo yeendaba ukuze bakhuphe igama!
Ukufikelela kubaphulaphuli ababanzi ngokukhawuleza, iiarhente zikarhulumente, ezingenzi nzuzo, imibutho kunye nabanye bajikela kwimithombo yeendaba zentlalo kulawulo lwentlekele.
Ukuxabisile ngokwenene oku kulungeleleneyo, nokucinga infographic evela kwindawo yoLawulo lweDigital Management ebonelela ngesikhokelo kunye nokuqonda malunga nendlela yokusebenzisa imithombo yeendaba njengesixhobo solawulo lwentlekele.
tags: mibuthongxakilawulo lweengxakiarhente karhulumenteengenzi nzuzo
Umxholo awuyi kuguqula ngaphandle kweefowuni-ezenzweni